Chrome 79 inopaza paLinux? Hausi wega | Linux Vakapindwa muropa
Zvinotaridza sekutanga kwe Chrome 79 kwaive kusiri kufara kutanga. Shure kweiyo kusunungurwa kweshanduro yekutanga Musi waZvita 11, Google yaifanira kudaro buritsa shanduro nyowani yeese ari maviri Android uye desktop masisitimu, asi mabugs achiri kuwanikwa ari kukanganisa macOS neLinux vashoma pane zvishoma. Nezviitiko izvi, hazvingashamise kana kambani yeinjini yekutsvaga yakakurumbira yatanga imwe yekugadzirisa mumazuva ari kuuya.
Pakati pezvinetso zviri kusangana nevamwe vashandisi veChrome isu tine kuti mamwe mapeji ewebhu (HTTPS) haatakure muMacOS, ayo kupuruzira pamusoro pezvakasiyana muChannel DevTools hakushandi, izvo inorembera paLinux ine ESET NOD32 yakaiswa kana iyo yakavandudzwa yeprofile / vanhu menyu yamiswa. Dambudziko reLinux rinogona kuoneka zvisinei nekuparadzira kwatiri kushandisa.
Chrome 79 iri kurovera paMacOS neLinux, pane zvishoma
Anoshandisa tsanangura paGoogle peji rekubatsira iyo:
Izvo zvinoita kunge zvisina basa zviri papeji. Zvinoitika nemavara kana akawanda ezvipo pane peji.
Ese tabo anoita kunge anotonhora panguva imwechete.
Chrome pachayo inoramba ichindipindurira, ndinogona kushandura tabo kana kudzvanya bhatani remenu.
Kudzvanya bhatani remenu kunoita kuti Chrome iite senge inombobuda kunze kwechando chayo, asi inowanzo gwamba zvakare nguva pfupi yapfuura.
Iyi chando inoitika chero kupi kubva pamasekondi mashoma kusvika kamwe mumasekondi makumi matatu.
Iyi glitch iri pamusoro, iri kusangana nevashandisi vazhinji, iri zvakasiyana nehutachiona hwakabatana nehutachiona. Mune ino bug, kupunzika kana kugwamba kunoitika pasina chero software inopesana nekushanda kwebrowser. Izvi zvaizosimbisa kuti kune bhagi muChannel 79. Icho chinhu chiri kukurukurwawo muLinux Mint subforum, iyo iwe yaunogona kuwana kubva Iyi link.
Zvakaipisisa pane zvese, iyo bug inogona kudzokororwa mune chero chromium-based browser, chero bedzi ivo vatove vaisanganisira iyo vhezheni kodhi 79. Zvakakodzera kuyeuka kuti angangoita ese akakurumbira mabhurawuza (akadai saVivaldi, Opera, Akashinga .. .) vari Chromium-yakavakirwa, saka dambudziko rakakomba kupfuura zvarinoratidzika. Izvozvi kuti madudu atanga kuzivikanwa, zviri kuGoogle kufambisa tebhu kuti igadzirise.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Chrome 79 inopaza paLinux? Hausi wega
Iko hakuna "Linux govera" asi "GNU / Linux kugovera. Kamwe uye zvachose. Ndapota. Regedza kudaidza yedu inodiwa yekushandisa system nenzira iyoyo. Linux ingori kernel.
Mhoro nhasi. Hausi iwe wekutanga kutaura nezvazvo, asi idzo nzira dzekutaura. Sezvo ivo vachiti "ndipfuure ini Kleenex" apo chinhu chakarurama chingave "kundipfuudza tishu" kana "Nocilla" kunyangwe kirimu iri "Nutella", vazhinji vanosiya "GNU" uye voti "Linux". Unogona kusabvuma, asi idzi dzinongova nzira dzekutaura.
Mune manjaro 18.1.5 xfce 4.14.1 (ine kernel 5.4.6 uye 4.19.91) uye NOD32 4.0.93 chromium inovhara mushure memasekondi mashoma, kutanga iyo skrini inopenya uyezve inovhara
Dambudziko raizove muSANDBOX, nekuti painomiswa, chromium haivhare